> Resource > Free > Top 5 Best Free AVI Video Rotators
Kaltan uh audio iyo video files waa arrin hawl aad u dhib inkastoo, laakiin ay ka imanayaan qaar ka mid ah video ah rotators si fiican u yaqaan ayaa xalliyo dhibaatadan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro ka mid ah barnaamijyada software video qoqobada taageera audio iyo video qaabab file badan; article hadda daboolayaa video ah qoqobada qalab taageero qaabab file AVI oo ay weheliyaan kuwo kale oo badan. Marka la eego hoose waa liiska hufan AVI video rotators in la heli karaa lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Ka sokow goynta iyo shaandhaynta video files, Avidemux saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku dhajisan iyo isku shaandheyn file video fudayd ka. Waxa ay taageertaa qaabab video caanka ah sida MPEG, AVI, wmv, MOV oo badan. Waxa ay u ogolaataa user ay u dhigay codec audio, video aragti iyo tayada si ay u helaan wax soo saarka la doonayo. Avidemux ayaa waxa sahlan in aad ku darto file video ah oo isbedel la isticmaalayo fursadaha kala duwan ee la heli karo in tab menu dhigi.
Presets faa'iido leh hawlaha wax soo saarka caadiga ah;
Video rotator waa fududahay in la isticmaalo software oo bixiya hawl gaar ah si ay u qabtaan taas oo aan ahayn video warejin ma jiro. User ee si sahlan u isticmaali karaan in ay ku jiididda iyo hoos u menu in ay doortaan oo isku shaandheyn video ah. Waxay qaadataa dhowr ah qaabab video sida talooyin iyo soo saara wax soo saarka qaab cayimay. Waxa wuxuu diyaariyaa nooca iyo ilaaliyaa video tayo sare leh.
Fududeeyaa processing Dufcaddii;
Video is A qoqobada qalab;
Sidoo kale ka shaqeeya sida video Converter hufan.
Qaar yar oo gacanta ku tafatirka.
Free video flip iyo isku shaandheyn waa codsi anfacaya oo kuu ogolaanaya in uu isticmaala inay isku shaandheyn ku files video qaabab kala duwan sida AVI, wmv iyo Mpg. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay qaadataa files aqbasho qaabab kala duwan, laakiin ay taageertaa kaliya qaab AVI sida wax soo saarka. Waxay leedahay screen eegis ah oo bixiya badhamada loo maqli karo kala duwan oo ku yaal. User ayaa isticmaali kartaa software this si gaar ah ama sidoo kale ku rakiban kartaa codsiyada Suite oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Waxay bixisaa waafaqsan.
Ma abuuri karaan presets;
Wax soo saarka AVI kaliya.
Software Tan waxaa ka mid ah qaababka video tafatirka kala duwan oo isku shaandheyn karo files Mpg, ASF, wmv iyo AVI hab ku haboon. Waxay awood u isticmaala in ay isku shaandheyn video ee darajo kasta oo ay doonayaan inay isku shaandheyn file ah; ay ku badbaadin karto faylka la isticmaalayo isku mid ah ama kala duwan Magaca faylka. Video Direct isku shaandheyn functionalities ayaa diyaar u ah labada files AVI Tifaftirayaasha iyo uncompressed.
Easy & dareen in Isticmaal;
Tirada cajiib ah qaabab video.
Kartida tafatirka Limited;
Tiro yar Features dheeraad ah.
Kasta Video Converter waa aalad socon in ay taageertaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video files AVI, MOV, Mpg iyo wmv. Waxaa la aqoonsan yahay mid ka mid ah video qoqobada software ugu waxtar leh in la Timaadda qaababka badan oo ay ka mid yihiin doorashada wareeg; waxay awood u isticmaala in ay isku shaandheyn file ee 90, 180 ad 270 degrees fudayd. Its user interface saaxiibtinimo iyo wax soo saarka oo tayo leh ayaa soo jiitay dadka isticmaala hab wax ku ool ah oo wax ku ool ah.
Haddii aad rabto in aad isku shaandheyn noocyada kala duwan ee video files video editor, Wondershare Video Editor waa doorashada weyn. Just meel files video on waqtiga ka dibna aad isku shaandheyn kartaa videos 90 darajo u socoto ama anticlockwise ama iyaga vertical iyo horizontal ayna miiqdaan.